बुलबुल नेपाल | मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनीबाटै कामदार ठगिने क्रम बढ्यो
मलेसिया, माघ १९ । लाखौं नेपाली युवाका लागि रोजगारीको गन्तव्यका रुपमा परिचित मलेसिया पछिल्लो समय नेपालि मजदुरहरुको हकमा थप कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले मलेसियासँग महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको दावी गरिरहँदा मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली युवाहरु दैनिक विभिन्न समस्याको चंगुलमा फसेर देश फर्किरहेका छन् ।
भर्खरै मात्र नेपाली जनप्रगतिशल मोर्चा मलेसियाले त्यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका एक नेपाली मजदुरको उद्वार गरेको छ। मोर्चाले विगत १८ महिनादेखि कम्पनीकै लापरबाहीले समस्या झेल्दै आएका शारदा नगरपालिका ४ सल्यानका लुट बहादुर थापालाई उद्वार गरेको हो । थापा विगत दुईवर्ष अघि रोजगारीका लागि काठमाडौंको सामाखुसीमा अवस्थित बि. एस. ओभरसिज प्राली बाट मलेसियाको 'Expoam security services' नामक सेक्युरिटी कम्पनीमा आएका थिए ।
जसोतसो काम गरेर पहिलो वर्ष बिताएका थापालाई दोस्रो वर्षको भिषाका लागि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने भयो। मेडिकल रिपोर्टले स्वास्थ्यमा अनफिट देखायो। त्यसो भएको खण्डमा कुनैपनी मजदुरहरु कम्पनीकै रोहवरमा तुरुन्तै स्वदेश फर्किन पाउने प्रावधान छ। यद्यपि त्यो विषयमा जानकारी नै नगराई कम्पनीले निरन्तर काम गरायो।
अठार महिनापछि थापाको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएर उपचारका लागि निवेदन दिँदा मात्रै मेडिकल अनफिट भएकोले बाहिर जान नमिल्ने अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपुर्ण जवाफ कम्पनीले दियो । पिडित थापाले उपचार नगर्ने भए नेपाल फर्काउन गरेको प्रस्तावमा उल्टै पाँच हजार रिंगिट रकम (नेपाली सवा लाख) तिर्नुपर्ने धम्कीपूर्ण चेतावनी दियो।
शनिबार, १९ माघ २०७५ मा प्रकाशित
Tags : #Malesiya #Nepali Kamdar